Hope dzaFarao Dzakadudzirwa | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Telugu Thai Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehovha Haana Kukanganwa Josefa
Josefa paakanga ari mujeri, Farao mambo weIjipiti akarota hope dzisina akakwanisa kudzitsanangura. Mumwe wevashandi vake akaudza Farao kuti Josefa ndiye aigona kumutsanangurira kuti hope dzake dzairevei. Farao akabva angotuma munhu kuti anoshevedza Josefa.
Farao akabvunza Josefa kuti: ‘Unokwanisa here kunditsanangurira kuti hope dzandakarota dzinorevei?’ Josefa akati: ‘MuIjipiti muchaita zvekudya zvakawanda kwemakore 7, uye muchazoitawo mamwe makore 7 enzara. Saka sarudzai murume akangwara kuti aunganidze zvekudya kuitira kuti vanhu venyu varege kufa nenzara.’ Farao akabva ati: ‘Saka ndasarudza iwewe! Uchange uri wechipiri pakutonga muIjipiti!’ Ko Josefa akaziva sei zvairehwa nehope dzaFarao? Jehovha ndiye akanga abatsira Josefa.
Kwemakore 7 akatevera, Josefa akanga achiunganidza zvekudya. Pashure paizvozvo, kwakazova nenzara panyika yese sezvakanga zvataurwa naJosefa. Vanhu vaiuya kuzotenga zvekudya kuna Josefa vachibva kwese kwese panyika. Baba vake, Jakobho, vakanzwa kuti kuIjipiti ndiko kwaiwanikwa zvekudya, saka vakatuma vanakomana vavo 10 kunotenga zvekudya ikoko.
Vanakomana vaJakobho vakaenda kuna Josefa uye Josefa akabva avaziva. Asi ivo havana kumuziva. Vakabva vamukotamira sezvaakanga arota paakanga achiri mudiki. Josefa aida kuziva kuti vakoma vake vakanga vachiine ruvengo here. Saka akati kwavari: ‘Muri vasori. Mauya kuzoongorora nyika yedu kuti muzive kuti ndepapi patisina kusimba.’ Ivo vakati: ‘Aiwa hatisi! Takaberekerwa kuKenani tiri 12. Mumwe munin’ina wedu akafa, uye mudiki wacho asara kumba nababa.’ Josefa akabva ati: ‘Uyai nemunin’ina wenyu kuno kuti ndimuone, ndiko kuti ndibvume zvamuri kutaura.’ Saka vakabva vaenda kumba kwaiva nababa vavo.
Mhuri yacho payakazopererwazve nezvekudya, Jakobho akaudza vanakomana vake kuti vadzokere kuIjipiti. Panguva iyi vakaenda nemunin’ina wavo Bhenjamini. Josefa akaedza vakoma vake. Akatora kapu yake yesirivha akaiviga musaga raBhenjamini uye akabva ati ndivo vakanga vaiba. Vashumiri vaJosefa pavakawana kapu yacho musaga raBhenjamini, vakoma vake vakashamisika chaizvo. Vakachema-chema vachikumbira kuti Josefa avarange hake pane kuti arange Bhenjamini.
Ipapo Josefa akabva aziva kuti vakoma vake vakanga vachinja. Josefa akabva akurirwa neshungu. Akatanga kuchema achiti: ‘Ndini Josefa, mwana wababa venyu. Baba vangu vachiri vapenyu here?’ Vakoma vake vakashamisika chaizvo. Josefa akati kwavari: ‘Musanetseka henyu nezvamakandiita. Mwari akandiunza kuno kuti ndiponese upenyu hwenyu. Iye zvino, endai munotora baba muuye navo.’
Vakadzokera kumba kunoudza baba vavo mashoko anofadza uye kunovatora kuti vaende navo kuIjipiti. Josefa nababa vake vakazova pamwe chete zvakare pashure penguva refu vasingaonani.
“Kana musingaregereri vanhu vanokutadzirai, Baba venyu havazokuregerereiwo pamunotadza.”​—Mateu 6:15
Mibvunzo: Jehovha akabatsira Josefa kuti aite sei? Ndezvipi zvakaitwa naJosefa zvinoratidza kuti akaregerera vakoma vake?
Genesisi 40:1–45:28; 46:1-7, 26-34; Pisarema 105:17-19; Mabasa 7:9-15
Farao Anopa Josefa Chinzvimbo
Joinai nhamba idzi moona kuti sei zvingangodaro zvakaomera vakoma vaJosefa kuti vamuzive.
Vanhu Vanotaurwa muBhaibheri Vakanga Vakafanana naJosefa
Dhaunirodha paIndaneti uye prinda nyaya iyi uye nyora zvinhu zvakafanana pakati paJosefa nevamwe vanhu 5 vanotaurwa muBhaibheri.
Mibvunzo: Ndiani Akataura Mashoko Aya? (Genesisi 41-50)
Dhaunirodha nyaya iyi paIndaneti woona kana uchigona kuziva kuti ndiani akataura mashoko acho.